May 6, 2021 - Channel Lover
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့သည့် အခြေအနေများ
May 6, 2021 by Channel Lover
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့သည့် အခြေအနေများ နိူင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကိုကြည့်ခွင့်မပေးပဲ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးကြောင်း ရှေ့နေပြော ပြည်သူလူထုက ​ရွေး​ကောက်တင်​မြှောက်ထား​သော အစိုးရ​ခေါင်း​ဆောင် ​ဒေါ်​အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယ​နေ့ ​နေပြည်​တော်တွင် ဗီဒီယို ကွန်ဖရင့်ဖြင့် ရုံးထုတ်စစ်​ဆေးရာ သူမ၏ ​ရှေ့​နေများကို ကြည့်ခွင့်မပြုဘဲ စစ်​ဆေး​ကြောင်း ​ရှေ့​နေများက ​ပြောသည်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တရားရုံးကသူတွေပဲတွေ့ခွင့်ရတယ်။ ကျနော်တို့က တရားရုံးကပြန်ပြောတာဘဲသိရတာ၊ဒါသဘာဝမကျဘူး ဟု ​ရှေ့​နေဦးကြည်ဝင်းကပြော သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုရုံး ချိန်းမေ၂၀ရက်ထပ်ချိန်းလိုက်ပြီး ထိုနေ့တွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ ဆုံခွင့်တင်ထားမှုတရားရုံးကဆုံးဖြတ်မည်ဟုရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းက ​ပြောသည်။ ဖေ​ဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်​နေ့တွင် အာဏာသိမ်းယူ၍ လူထုအစိုးရ​ခေါင်း​ဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ credit unicode နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအား ယနရေုံ့းထုတျစဈဆေးခဲ့သညျ့ အခွအေနမြေား နိူငျငံတျောအတိုငျပငျခံကိုကွညျ့ခှငျ့မပေးပဲ ရုံးထုတျစဈဆေးကွောငျး ရှနေ့ပွေော ပွညျသူလူထုက ​ရှေး​ကောကျတငျ​မွှောကျထား​သော အစိုးရ​ခေါငျး​ဆောငျ ​ဒျေါ​အောငျဆနျးစုကွညျကို ယ​နေ့ ​နပွေညျ​တျောတှငျ ဗီဒီယို ကှနျဖရငျ့ဖွငျ့ ရုံးထုတျစဈ​ဆေးရာ … Read more
စဈကောငျစီအမိနျ့နဲ့ ရောကျလာတဲ့ ကြောငျးဆရာ သုံးဦးကို ရှာ ပွငျမောငျးထုတျ(ရုပျသံ)
မကွေးတိုင်း၊ ပေါက်မြို့နယ် ကွန်းရင်းရွာမှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအမိန့်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းဆရာ သုံးဦးကို ရွာ ပြင်မောင်းထုတ်တဲ့ မြင်ကွင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မကွေးတိုင်း၊ ပေါက်မြို့နယ် ကွန်းရင်းရွာမှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအမိန့်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းဆရာ သုံးဦးကို ရွာ ပြင်မောင်းထုတ်တဲ့ မြင်ကွင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မကွေးတိုင်း၊ ပေါက်မြို့နယ် ကွန်းရင်းရွာမှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအမိန့်နဲ့ ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းဆရာ သုံးဦးကို ရွာ ပြင်မောင်းထုတ်တဲ့ မြင်ကွင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် မေ ၆ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတန်း
တနင်ျဂနှေ ဒီအပတျအတှငျးမှာ ဘာပဲဖွဈဖွဈစိတျခမျြးသာစရာတှေ မြားနတေတျပါတယျ။ အကွီးအကဲတှရေဲ့ ခဈြခငျမှု ကူညီထောကျပံ့မှုတှလေဲရလှယျနတေတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကလဲ ဒီကာလမှာ သိပျပွီးဆိုးဆိုးရှားရှားမဖွဈနိုငျပါ ဘူးဗြ။ကနျြးမာရေးကောငျးနလေိမျ့မယျ။ လူငယျလူရှယျမြား စနျးအားတှကေောငျးနတေတျတယျ။ ဝေးကှာနတေဲ့ခဈြ သူနဲ့ဖွဈစေ၊ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ဖွဈစေ ပွနျဆုံဆညျးခှငျ့ရလှယျတဲ့ကာလပါပဲ။ မထငျမှတျပဲ သငျတနျးတဈခု တတျဖွဈ တာ၊ အလှူအတနျးကိစ်စတဈခု၊ ဘာသာရေးကိစ်စတှေ လုပျဖွဈတာမြိုးတှလေညျး ကွုံရတတျပါသညျ။ ဘယျလောကျပဲ ငှတှေဝေငျဝငျ မမွဲဘူးဖွဈနရေတတျပါသညျ။ ရှိပွီးသားပစ်စညျးတှလေညျး ထှကျသှားတတျပါသညျ။ ကိုယျကအဆငျ ပွနေတေော့မနာလိုသူမြား၊ နှောကျယှကျသူမြားလညျး အလှနျပေါမြားနပေါလိမျ့မညျ။ အထူးသဖွငျ့ ဆှမြေိုး၊ သားခငျြး အရငျးအခွားမြားကွောငျ့ စိတျရှုတျထှေးနရေတဲ့ အခြိနျအခါမြိုး ဖွဈနရေတတျပါသညျ။ အိမျတှငျးရေး ကိစ်စ တှမှောတော့ သားသမီးကိုအကွောငျးပွုပွီးပွဿနာတှဖွေဈရတတျပါတယျ။ ပညာရှာနသေူမြား ပညာရဖို့ဝေးနပေါ သေးတယျ။ ခရီးကိစ်စမြား အောငျမွငျမညျ။ဒါပမေယျ့ မိတျဆှရေငျးတှေ အရမျးမယုံဖို့ ဒီကာလထဲ မှာခငျြပါတယျ။ အကြိုးပေးဂဏနျး … Read more
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမ များ၏ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံရ
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမ များ၏ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံရ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကျောင်းဖွင့်ပြီး ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမ များ၏ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မိတ္ထီလာမြို့ မြို့သစ်ရပ်က ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ စစ်ကောင်စီအလိုကျ ကျောင်းဖွင့်ပြီး ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမများ၏ ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ဓာတ်ပုံ – CJ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမ များ၏ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံရ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကျောင်းဖွင့်ပြီး ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမ များ၏ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မိတ္ထီလာမြို့ မြို့သစ်ရပ်က ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ စစ်ကောင်စီအလိုကျ ကျောင်းဖွင့်ပြီး ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမများ၏ ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ဓာတ်ပုံ – CJ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ကျောင်းတက်နေသည့် ဆရာ/ဆရာမ များ၏ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ခံရ … Read more
အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းကို ဒါတွေပြင်ဆင်ထားပါ. . . . အဓိကကတော့ဖုန်းစစ်တာပါ
ဒီနေ့ညီမတို့ကားသုံးခါတိတိအစစ်ခံရပါတယ် မြေနီကုန်းမှာတစ်ခါ မရမ်းကုန်း Mercedes Showroom နားမှာတစ်ခါ ၈မိုင်ကုန်းကျော်တံတားဆင်းဆင်းချင်းနားမှာတစ်ခါပါ စစ်တဲ့ထဲမှာတော့မြေနီကုန်းမှာစစ်တာကအင်အားအများဆုံးပါ မြေနီကုန်းမှာစစ်တော့ညီမတို့ကားရဲ့အရှေ့ကကားမှာ ကားပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့သံတုတ်တွေသံချိုက်တွေပါတော့ အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်Platform ပေါ်ပစ်တင်ပြီး “ဘာလို့အဲ့ပစ္စည်းတွေယူလာလဲ” လို့မေးပါတယ် ကားမောင်းသမားရောပါလာတဲ့သူတွေကိုပါ ကားပေါ်ကဆင်းခိုင်းပါတယ် သူတို့ကိုပေးမသွားသေးဘဲ ညီမတို့ကားကိုထပ်စစ်ပါတယ် နောက်ဖုံးတွေအကုန်ဖွင့်ပေးရပါတယ် ရှိသမျှချောင်ကြိုချောင်ကြားမကျန်အသေးစိတ်စစ်ပါတယ် အဓိကကတော့ဖုန်းပါစစ်တာပါ ‼️ညီမတို့ကားမှာဘာသံတုတ်မှလည်းမပါဘူး ဖုန်းတွေစစ်တာကလည်းအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးသွားပါတယ် ညီမတို့အရှေ့ကကားကတော့ ညီမတို့သွားတာတောင်ပေးမသွားပါဘူး ဖုန်းစစ်တာကတော့ Gallery ရယ် Facebook ရယ်ကိုအဓိကထားပြီးစစ်ပါတယ် (အဲ့တော့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ Twitter အတွက်ပုံsaveထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေsaveထားရင် Hideထားပါ ဖျက်ထားပါ) ပြီးရင် Facebook account နောက်တစ်ခုပြင်ဆင်ပြီးမှ အပြင်သွားပေးကြပါ ❗️ အဲ့တော့အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် – ကိုယ်ယူသွားမယ့်ဖုန်းကိုဖျက်သင့်တာဖျက်ပြီးသေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးမှသွားပါ (ဖုန်းစစ်တဲ့နေရာမှာဘာerrorမှတက်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူး ဖုန်းကအန္တရာယ်များလို့ပါ မပါဘူးလို့ငြင်းလည်းဒဏ်ငွေပါ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး) – ကားထဲမှာလည်းသစ်သားတုတ်သံတုတ်နဲ့ လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကားပေါ်ကထုတ်ထားပေးကြပါ (ကားပစ္စည်းလို့လည်းငြင်းမရဘဲဆွဲထားတာပါ) – ကားမောင်းတဲ့သူရော … Read more
အင်းစိန်ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ ပြောပြလာတဲ့ လူမင်း ပြေတီဦး ဦးဇင်ဝိုင်း တို့ရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ အခြေအနေများ
အသံဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုလူမင်းအတွက် စိတ်ပူလို့ ငိုရတာ မျက်ရည်တွေတောင် ခမ်းတော့မယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပါယ်ဦး အကယ္ဒမီသရုပ်ဆောင္လူမင်းကိုတော့ လြန္ခဲ့တဲ့လ ၂၀ ရက် စေနေန့ညကပဲ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင္စီက ဖမ်းစီးသြားခဲ့တျာဖစ္ပါတယ်။ ဇနြီးဖဈသူ ခင်စံပယျဦးအနေနဲ့လညျး ခင်ွပနျြးဖဈသူကို စိုးရိမျနပွေီး မျကျရည်ခမျးအောင်ကို ငိုနရေတယျ လို့ဆိုပါတယျ။ ခင်စံပယျဦးက လူမှုကွနျရက်ကနေ ယောကျားရယျ မိနျးမမှာ ယောကျားအတွက်စိတ်ပူပွီးငိုရလွနျးလို့မျကျရညျတွေ တာင်ခမျးတော့မယ်ဒါပမေယျ့လညျး မယိုင္လဲသြားအောင်တော့ကြိုးစားပြီးအားတင်းထားပါတယ် လို့ ခံစားခ်က္ကိုရေးထားတာပျဲဖစ္ပါတယ်။ အဆိုပါpost လေးအောက်မှာတော့ ပရိသတျတွနေဲ့ အနုပညာရှငျတွကေလညျး ထပ်တူခံစား ရကွောငျးဖျောပြပေးခဲ့ကွပါတယျ။ လူမင်း အပါအဝင်အနုပညာရွင် ၆ ဦး ကို သူတို့ရဲ့ ကေ်ာ်ကြားမှု အရွိန်အဝါကိုသုံးပြီး ဝန္ထမ်းတြေ သပိတ်မွောက္ဆန္ဒျပြကေအာင် လှုံ့ဆ္တောယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္နဲ့ ပုဒ္မ … Read more
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေသူများ အထူးသိထားဖို့လိုပါတယ်…။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေသူများ အထူးသိထားဖို့လိုပါတယ်…။ ဘူရီရမ်ခရိုင်မှာ ၂၄ နာရီအိမ်ပြင်မထွက်ရကာဖျူးထုတ် ! ကာဖျူးအမိန့်ထပ်တိုး ! ခရိုင်ပေါင်း ၂၈ ခရိုင် ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထား ! ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာနှင့် ထိုင်းပြည်ထဲရေးက မေလ ၄ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ခရိုင်ပေါင်း ၂၈ ခရိုင်ကို ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ် ပြန်ထားပါတယ်။ ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ၁.ဖရဲ့ခရိုင် ည ၁၁ နာရီမှ – နံနက် ၃ နာရီ ၂.ဥထိုင်းဌာနီခရိုင် ည ၁၁ နာရီမှ – နံနက် ၄ နာရီ ထိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်း ၁. ချိုင်းယနတ် ည ၁၁ နာရီမှ – နံနက် ၄ နာရီ ၂. နခွန်နာယွတ် ည … Read more
ယနေ့ ထိုင်းထီဆု ပေါက်တဲ့ ဘတ် ၆ သန်း ကံထူးရှင် မြန်မာလုပ်သား နှစ်ဦး
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ ကိုလူမင်းအတွက် ရင်ဖွင့် စကားပြောလာတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦး
ထိုင်း ထီပေါက်စဉ် အစ အဆုံး တိုက်နိုင်ပါပြီ…(ပုံကိုနိုပ်တိုက်ရန်)
ထိုင်းချဲ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ….
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်၏ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း